Wicitaanka Raadinta waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay ka faa'iideystaan ​​falanqaynta
Wednesday, May 23, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Cilmi baarista Google ayaa muujinaya in 80% macaamiisha Kuwa booqda degel websaydh ah iyadoon loo eegin kombuyuutar, taleefan casri ah ama kaniini ah doorbido wicitaan halkii aad ka heli lahayd emayl ama foomka tooska ah ee tallaabada xigta. Sidoo kale, 65% dadka isticmaala taleefannada casriga ahi maalin kasta ayay galaan internetka 94% ka mid ahina waxay sidaas u sameeyaan si ay u baaraan wax soo saar ama adeeg, laakiin ugu dambayn 28% oo keliya ayaa ugu dambayn sii wada inay wax ku iibsadaan isla aaladdaas.
Tan macnaheedu waxa weeye kuwa wax iibiya waa ta iyagu Analytics xogtu ma dhameystirna waxaana laga yaabaa in loo horseedo waxqabadka sumadeynta halkii laga maalgelin lahaa suuqgeynta internetka ee ay sameynayaan. Xalka kordhinta soo noqoshada doollarka suuqgeynta ayaa ku jiidan kara wicitaan-wicitaan oo kuu oggolaanaya inaad farta ku fiiqdo wadada saxda ah ee dijitaalka ah ee macaamiisha ay u marayaan inay ku gaaraan halka ay ku iibinayaan.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu hirgaliyo raadinta wicitaanka. Hal dariiqo oo fudud ayaa ah beddel lambarka taleefanka iyada oo ku saleysan ilaha tixraaca ee bogga. Waxaan dhab ahaan dhajinay qoraalkii aan soo saarnay si tan loo sameeyo. Si aan u bilawno, waxaan kaliya kugula talineynaa macaamiisha inay helaan lambar taleefan oo raadinta, mid bulshada, iyo mid tixraaca boggaga si ay u bilaabaan tirakoobka dadaalkooda qayb ahaan. Dariiqa kale ayaa ah inaad iska qorto isla markaana aad dhex gasho adeeg xirfadeed - inbadan oo ka mid ah kuwaas oo runtii ka diiwaan gashan doona dhacdooyinkaaga caadiga ah Analytics codsiga.
Adeegyada wicitaanka-raadinta waxay uruurisaa macluumaadka ilo badan, oo ay kujiraan suuqgeynta mashiinka raadinta, ololeyaasha AdWords iyo kuwa kale waxayna kuxiraan macluumaadka wicitaanka taleefanka si loo raadiyo wadada macaamilku u maro. Tani waxay bixisaa macluumaad fara badan oo ku saabsan asalka nolosha dadka macaamiisha ah, oo ay ku jiraan sida ay ku ogaadeen badeecada ama ganacsiga. Macluumaadkaas oo kale, suuqgeynta la bartilmaameedsanayo, oo u oggolaaneysa in la kordhiyo soo celinta halkii doolar ee maalgashi lagu sameeyo suuq-geyn, ayaa noqota gabal keeg ah.
WadahadalTech waa mid ka mid ah adeegyadan oo kale, oo leh isku xirnaan loogu talagalay Hubspot, Google Analytics, iyo barnaamijyo kale oo badan. Waxay leeyihiin API xoog leh. Ciyaartoyda kale ee suuqa ku jira ayaa ah Wicitaanada, Isdhexgalka Qarniga iyo LogMyCalls.
Marka rajadu u yeerto ganacsi, adeegga wicitaanka raadraaca wuxuu isku darayaa macluumaadka la heli karo si loo go'aamiyo in qofka soo waca uu soo wacay ka dib markii uu daawaday xayeysiis dijitaal ah oo la bixiyay, liiska mashiinka raadinta dabiiciga ah, ama Facebook. Waxay uqaadaan falanqaynta illaa heerka ugu hooseeya ee faahfaahinta, oo ay kujiraan ereyada muhiimka ah ee lagu qoro mashiinka raadinta, waqtiga uu soo wacayo taleefanka xayeysiiska, haddii wicitaanku uu ahaa mid khadka tooska ah ama taleefanka gacanta ah, iyo wixii la mid ah. Xogtaas xitaa waxaa loo gudbiyaa falanqaynta xaaladaha qaarkood. Xogtaasi waxay sawir cad ka bixineysaa waxtarka doolar kasta oo suuq geyn ah oo la maal galiyo, waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si fiican u hagaajiso miisaaniyadaada suuq geynta iyo istiraatiijiyadda si waafaqsan.
Tags: Analyticsraad raadinwada hadalkaifbyfoonwicitaanada telefoonkalambarada telefoonkaliin dhanaanwaa maxay raadinta wicitaanka
Tani waa qayb fiican oo dood adag ah oo loogu talagalay raadinta wicitaanka. At Cente Interactive, waan ku heshiin lahayn 🙂
Badanaa, suuqleydu ma helayaan amaahda ay u qalmaan. Wadahadalka u dhexeeya suuqleyda iyo macmiilka mararka qaar wuxuu u egyahay sidan:
Macaamiil: “Markaa waxaad igu kaxaysay 20 riix adWords shalay laakiin waan ogahay inaan taleefankayga garaacin oo aanan helin wax ganacsi ah. Maxaan mar labaad kuu siiyaa?
Suuqa: “Sug sug! Waan ogahay inaad ka heshay xoogaa raadad diiran qasabadaha! Sax? Waxaan rajeynayaa?"
Ka waran haddii suuqleydu dhihi karto:
“Waxaan kuu soo gudbiyey 20 guji waxayna ka yimaadeen afartan eray ee muhiimka ah. 4 ka mid ah qasabadahaas waxay keeneen wicitaano taleefan ah 13 ka mid ahna waxay ahaayeen iib weyn! Ha i aaminin? Aan wada dhagaysanno wicitaanada taleefan ee la duubay si wadajir ah, waan ku tusi doonaa waxaan ula jeedo. ”
Wicitaan kastaa wuxuu sheegaa sheeko mudan in loo sheego.
Baloog weyn oo ku saabsan raadinta Wicitaanka oo runtii waxay leedahay faa'iidooyin badan.
Halkan waxaa ku yaal liistada faa'iidooyinka aan dhowaan soo ururiyey kuwaas oo ka caawin kara qof kasta oo akhriya tan inuu ogaado sida ay muhiimka ugu tahay raadinta wicitaanku suuq kasta oo cabbiraya ololahooda iyo qadka toosan.
Ka cabir ololahaaga suuq-geynta guji si aad u wacdid - adigoo ogaanaya inuu jiro xiriir ka maqan marka la cabbirayo oo keliya booqashooyinka websaydhka
Waddooyinka booqdayaasha waxaa laga arki karaa websaydhka oo tilmaamaya barta saxda ah ee wicitaanka
Lambarka gaarka ah ee soo booqde kasta oo gaar ah
Lasoco ereyada muhiimka ah ee aan xadidneyn
isbarbardhigaya wicitaanadaada ka dhanka ah iibkaaga si loo aqoonsado ereyada muhiimka ah ee runtii dhaliya iibka
Is-dhexgalka Google ™ wuxuu siinayaa awood uu ku dhex-geliyo xogta wicitaanka Google Analytics ™ si qasabadaha loo barbar dhigo qiyaasta wicitaanka.
Ma jiro qalab lagu rakibo, si fudud u gal nidaamka soo gudbinta daruuraha ku saleysan 24/7 adoo adeegsanaya soo gal internetka ah.
Haa, wicitaanada wicitaanku waxay xaqiiqdii u muuqataa mid qiimo leh. Maalgashiga suuqgeynta internetka wali waa lagama maarmaan maadaama ay tahay maalgashigaas oo abuuraya hoggaanka meesha ugu horeysa.